बर्खे विकास - सन्दर्भ - साप्ताहिक
- अधिकारी रवीन्द्र
श्रावण ७, २०७५
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । असार महिना भर्खर सकियो र यो महिना नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । कारण हामी नेपालीको मुख्य बाली धान यही महिनामा रोपिन्छ । महिनाको अधाआधीमा धान रोपेर, दही–चिउरा खाएर अनि विविध सांगीतिक कार्यक्रम गरेर धान दिवससमेत मनाइन्छ । यो महिना हामी धान रोप्न कँही छोड्दैनांै । काठमाडौंकै विभिन्न स्थानका बासिन्दाले सडकमै रोपाइँ गरेर उक्त कुरा पुष्टि गरिसकेका छन् । कृषिप्रधान देश भैकन यति पनि फाइदा लिन सकिएन भने त के काइदा ? असारैभरि रोपाईंको नाममा हिलोमा लडीबुडी खेल्दै रमाउने कलाकार तथा मोडलहरूको पनि खाँचो भएन देशमा । जनप्रतिनिधिहरू पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि कोदालो लिएर बाउसे गर्न र घुम ओडेर बीउ काढ्न पछि परेनन् ।
यद्यपि रोपाईंलाई फगत मनोरञ्जनका रूपमा लिनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । खेतका कुनै गह्रामा बाजा अनि ध्वजाका साथ ५ सय भन्दा बढीले रोपाइँ गरेको नाटक मञ्चन भैरहँदा लाखौं किसानका फाँट लाठे र रोपाहारको अभावमा बाँझो पल्टन तयार भैरहेको यथार्थता हामीले बिर्सनु हुँदैन । एक दिन रोपाइँको मज्जा लिनेले धानको फसल नकाटुन्जेल कति कष्ट गर्नुपर्छ बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ ।
कृषिमा प्रोत्साहन तथा कृषकको पहँुच बजारसम्म नहुँदा उनीहरू निरुत्साहित छन् र बिचौलियाहरू मोटाएको मोटायै छन् । तसर्थ अब नयाँ पुस्ताले कृषि पेसै त्याग्ने, बरु जग्गा बेचबिखन गर्ने अनि विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । गाउँघरमा ज्यालामा काम गर्ने कामदार पाउनै कठिन छ । त्यसै पनि सहर आसपासका खेतीयोग्य उर्भर भूमि प्लटिङ गरेर घडेरीमा परिणत् भैसकेका छन् । त्यहाँ अन्न फलफुल होइन, अब कङ्क्रिटका पिल्लर रोपिनेछन् । त्यति नभए जग्गा कारोबारीहरूले एउटै जग्गाबाट पटक–पटक गरेर लाखौं रुपैयाँ कसरी उमार्ने ?
थोरै प्रसंग बदलाँै । कसैको विरोध गरिरहन मजा आउँदैन । हिजोआज सबैले सबैतिर गर्ने धन्दा नै त्यही हो । आफूचाहिँ वरको सिन्को पर नसार्ने अर्काको चाहिँ निरन्तर विरोध मात्र गरिरहने । हामी एकछिन रमाइलो गराँै । रमाइलो गर्न हामीसँग प्रशस्तै कारण छन्, दुइतिहाई बहुमतको सरकार जो आएको छ । जसरी यो वर्षातमा खोलाबाट सडकसम्म भलहरू बगेका छन्, टोलटोलमा विकासको बाढी अझ ठूलै रूपमा बगेको छ ।
हिजोआज अधिराज्यभर जहाँ जानुस् विकास आफ्नो विकराल रूप लिएर त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छ । सहरका कुनै पनि गल्ली विकासबाट अछुतो छैन । जताततै निर्माण कार्य भैरहेको छ । यतिबेला पहाडको ढिस्को फोडेर गाउँगाउँमा चौडा सडक पुर्‍याइँदैछ । पहिरोले शिरदेखिकै पहाड बगाएर नयाँ राजमार्गलाई छोपिदिन्छ, तैपनि विकास रोकिएको छैन । दसौँ पटक क्रेन लगाएर सडक सफा गर्न किन नपरोस्, विकास घर–घर पुगेरै छोड्छ ।
जेठको अन्त्यसम्म पनि विकास आउला जस्तो कुनै छाँट्काँट थिएन । जताततै उजाड अनि सुख्खा । त्यतिबेला साह्रै विरक्त लाग्थ्यो मनोरेल र पानीजहाज देख्न हाम्रो पुस्ता पनि मासिनैपर्ने हो कि क्या हो भनेर । जब असारे सङ्क्रान्तिले मुलुकमा पाइला टेक्यो विकासको मूल फुट्न थालिहाल्यो । अहिले यति भटाभट विकास भइरा’छ कि घर, मामाघर वा फुपूघर जहाँ जानुस् बाटो हिँडिसाध्य छैन र ठेकेदारहरू सडकको डीलमा छाता ओढेर डोजर अपरेटरलाई औँलाले आदेश दिइरहेका हुन्छन् अनि अनेकथरी उपभोक्ता समितिका फ्लेक्स रूखरूखमा झुन्ड्याइएका हुन्छन् ।
हाम्रा सडक–गल्लीहरू पनि त्यस्तै, भत्किएका कुरुप खाल्डाखुल्डी लिएर ११ महिना यही असारे झरीको प्रतीक्षा गर्छन् । जनताका घरघरलाई ढल पनि यही असारमा चाहिन्छ । यसरी सबैको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले पनि असारमै बजेट निकासा गर्छ । असार मसान्तसम्मका दुईदिने–तीनदिने परियोजनाहरू देख्दा लाग्छ, अब देशले कायापलट गर्नेवाला छ । सर्वसाधारणहरू १ महिना बाटोका हिलो र खाल्डोमा जाकिएर के भो त ? आखिर देश बन्न एउटा पुस्ताले दु:ख सहनैपर्छ । परिणाममुखी काम भैदिए त के भो र, एक महिना मात्र किन हामी बाह्रै महिना सास्ती खेप्न तयार छांै ।
पोहोर परारको जस्तै असारमा भएको चरम विकास साउनको भेलले छोपेर भदौसम्ममा पूर्वावस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने भय सबैको मनमा उत्पन्न भैरहन्छ । शंका मात्र होइन, दुई–चारवटा सडकमा वर्षातबीच गरिएको पिच भोलिपल्टै भकाभक उप्किएको भिडियो देख्दा झसङ्ग नै भइन्छ । हुन त वर्षौंदेखि यही प्रक्रिया चल्दै आएको हो । हरेक वर्ष यो सालचाहिँ केही फरक होला कि भनेर आश पनि गरिँदै आएको हो । थोरै गर्ने तर दिगो गर्ने भन्दा पनि धेरै गरेर क्षणिक लोकप्रियता कमाइ पैसा तह लगाउने प्रवृत्ति अब त बदल्नुपर्ने बेला भएन र ?
प्रकाशित :श्रावण ७, २०७५
आशा गरिएकैबाट निराशा
मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ भिडियो च्यालेन्ज पोखरामा
कुरा मात्र भो
युवा प्रतिभा तथा उत्कृष्ट खेलाडी
३ वर्षको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार एकै पटक
सुकुटे बिच भाद्र ४, २०७६
समाजका चित्रहरू श्रावण २६, २०७६
सफलताको सूत्र श्रावण १७, २०७६
अचम्मको चिनाजानी श्रावण ४, २०७६
महिला र पुरुष समान होइनन् असार १२, २०७६
काठमाडौं जिन्दगी जेष्ठ ३०, २०७६
जेठ १९ पछि... जेष्ठ २०, २०७६
डिजाइनर बेबी जेष्ठ ९, २०७६
डेरा जिन्दगी जेष्ठ २, २०७६
यात्रुको वर्गीकरण वैशाख २९, २०७६